"ကြေးကြီးတယ် - ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး"
❤️❤️ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးတွေ တောင်းဆိုနေတဲ့ "ကြေးကြီးတယ်" ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၂၆) ရက်နေ့မှာ ရုံတင်ပြသပေးတော့မှာဖြစ်လို့ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကြည့်ရှုနိုင်တော့မှာနော်...
Official Trailer လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...❤️❤️
ဒါနဲ့ ဇာတ်လမ်းထဲက ကြေးကြီးတဲ့ သူဟာဘယ်သူလဲ🔪👤???
ပိုက်ဆံ ၁၅၀၀ ဟာ ဘယ်လောက်တောင်ကြေးကြီးသွားမလဲ???
ဘယ်လိုတွေ အကွက်ချထားဦးမှာလဲ??? ဆိုတာကို...... စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ...
အကယ်ဒမီမြင့်မြတ် ၊ နေမျိုးအောင် ၊ ဇွဲနိုင်ဝင်း ၊ ထွန်းကိုကို ၊ အိချောပို ၊ နေဆန်း ၊ သတ္တိ ၊ လင်းဇာနည်ဇော် ၊ ခင်ဇာခြည်ကျော် ၊ မေမြတ်နိုး